Deegaanku | UNSOM
18:29 - 26 Oct
Qorshaha UNSOM ee diiradda lagu saarayo degaanku wuxuu ku howlgalaa codsiga Golaha Amaanka ee arrimaha cimilada iyadoo wax lagu wado hab-raaca SCR 2540. Mid ka mid ah hadafyada waawayn waa in si wanaagsan loo fahmo xiriirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo salka amaan darrada Somalia.
Isbeddelka cimilada ee Somalia waxay saamayn taban ku leedahay hab-nololeedka dadka Somalia iyadoo sidoo kale uga dartay tiradii dadka barakacayey oo awalba xumayd. Waxay sidoo kale dad badan u nuglaysey saamaynta dagaallada iyo amaan darrida iyagoo aan lahayn meel ay u ciirsadaan. Daraasado dhowr ah ayaa muujiyey xiriirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo amaan darrida. Xaaladaha amaan darridu waxay dhacayaan marka ay yimaadaan xasarado dhanka cimilada ah oo kordhiya sinnaan la’aanta iyo nuglaanta, taasoo markeeda caqabaad dheeraad ah hor dhigaysa fulinta sharciyadda UNSOM. Waxaa sidaa darteed muhim ah in cimilada iyo amaan darrida loo arko si wadareed si loo awoodo in wax laga qabto waxa keenaya amaan darrida, oo ay ku jiraan dhibaatooyinka la xiriirka cimilada.
Wajahaad isku xiran:
UNSOM waxay diyaarisay dhowr xal oo lagaga jawaabayo caqabadaha la xiriira cimilada. Kaddib markii ay wax ka barteen jawaabihii hore ee fashilmay — oo laga xusi karo abaatii 2011 — Hindisaha cusub ee UNSOM wuxuu noqon doonaa in la hirgeliyo dhowr jawaabood oo isku xiran si loo qaabilo baahiyaha waqtiga gaaban ee aadnimmiada iyo kuwa fog ee lagu higsanayo bulsho adkaysi leh oo waari karta. Wax ka qabadka xaaladaha deg degga ee cimiladu wuxuu u baahan yahay faragelin aadninnimo-horumarin-nabad dhisid oo isla socda, si loo soo saaro xal waara iyo adkaysi lagu baajiyo halisaha mustaqbalka.
Caqabadaha ay wajahayso UNSOM iyo jawaabaha ay ka bixinayso waxay u baahan yihiin siyaasad iyo qorshe is waafaqsan oo jawaabaha halisaha amaan ee cimilada la xiriira u rogi kara fursado ay QM ku yagleesho nabad waarta.
Horay u socod:
Kooxda amaanka cimiladu waxay diiradda saarayaan dhowr meelood:
In la joogteeyo wajahaado dhanka degaanka iyo amaanka cimilada ah oo ay isla fulinayaan QM iyo saaxiibadeed. Waxaannu taa fulinaynaa annagoo raacayna lafa-gur si gaar ah ugu ligan dhanka khilaafka jira, nabad ilaalin degaan iyo wajahaado dhanka degaanka ah oo loo marayo xasilinta. Waxaannu samaynaynaa dhowr hab-howleed oo ku saabsan iskaashi dhanka degaanka ah, daadadka iyo maaraynta biyaha si ay dalalku jawaab midaysan uga bixiyaan arrimaha daadadka iyo abaaaraha.
In la sameeyo iskaashi lala yeelanayo ururrada maxalliga ah, hay’aadka caalamiga ah ee maaliyadda sida Bankiga Adduunka, iyo hay’aadka ay khuseeyso ee QM, sanduuqyada khayriga ah iyo barnaamijyada kala duwan si loo fuliyo tillaabooyin la qabsi iyo kahortag ah. Waxaan sidoo kale la shaqaynaynaa DF iyo Maamul-goboleedyada oo aannu kala hadlayno siyaasadaha horumarineed iyo taageerada mug dhisidda si loo xoojiyo dedaallada guud ee QM ee mug dhisidda ah.
In la ururiyo xogo, caddaymo iyo daraasado awood noo siinaya in aannu fahamno xiriirka iyo saamaynta isbeddelka cimiladu ku leeyihiin siyaasadda iyo amaanka dalka. Taasi waxay naga caawin doontaa in aannu curinno qaabab aannu mashaariic uga samayn karno meelaha ay ka jiraan dhibaatooyinka cimiladu iyo sidii loo dhisi lahaa adkaysi ka dhasha meelaha mashaariicda laga fulinayo
Daraasaadka iyo qoraallada la daabacay: